HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kikaonde Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Xhosa Zoloa Éwé
24 SEPTAMBRA 2014
Nosamborin’ny manam-pahefana any Érythrée ny tovolahy telo, 20 taona lasa izay. Nampidirina tao amin’ny fonjan’i Sawa izy ireo ary mbola any hatramin’izao. Tsy voampanga ho nanao heloka bevava izy ireo tamin’izany, sady tsy mba navela hiaro ny tenany teny amin’ny fitsarana. Nahoana àry izy ireo no migadra?
Vavolombelon’i Jehovah i Paulos Eyassu sy Negede Teklemariam ary Isaac Mogos. Tsy mety manao miaramila izy ireo noho ny zavatra inoany. Raha tena nampangaina ho mpanao “heloka bevava” izy ireo noho izy ireo tsy nety nanao miaramila, dia tokony ho voafaritra tsara hoe firy taona izy ireo no migadra. Lany tany am-ponja anefa ny fahatanoran’izy ireo satria efa 41 taona izao i Paulos, 40 taona i Negede, ary Isaac kosa 38 taona. Tsy mba afaka nanambady sy nanan-janaka akory izy ireo, na navela hikarakara ny ray aman-dreniny be taona, na hanao izay tiany. Tsy afaka nanompo an’Andriamanitra niaraka tamin’ireo mpiara-mivavaka taminy koa izy ireo.
Tamin’ny 24 Septambra 1994 i Paulos sy Negede ary Isaac no nosamborina. Nampijalijalina izy ireo rehefa tonga tany amin’ny fonjan’i Sawa, saingy nitsahatra izany tato anatin’ny taona vitsivitsy. Lasa nanaja azy ireo ny mpiambina ny fonja, noho izy ireo tapa-kevitra ny tsy hiala amin’ny zavatra inoany.
Miaritra ny mafy koa ny Vavolombelona hafa
Any Érythrée no tena mafy ny fanenjehana ny Vavolombelon’i Jehovah. Vavolombelona 73 no any am-ponja, tamin’ny fotoana nanoratana an’ity lahatsoratra ity. Misy vehivavy sy ankizy ary zokiolona amin’izy ireo. Betsaka no gadraina ao amin’ny toerana mafana be, zara raha omena sakafo sy rano, ary ampijalijalin’ny mpiambina ny fonja. Efa folo taona mahery izao ny Vavolombelona telo hafa no nigadra tao amin’ny fonjan’i Sawa. Ny an’i Paulos sy Negede ary Isaac anefa no ela indrindra.
Manao antso avo amin’i Érythrée ny firenena maro mba hampitsaharany ny fanenjehany fivavahana
Firenena maro no mahalala fa ampijalin’i Érythrée ny Vavolombelon’i Jehovah sy ny mpivavaka hafa vitsy an’isa.
Efa hatramin’ny 2004 ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny amerikanina no nilaza fa “mampanahy” ny momba an’i Érythrée. Manitsakitsaka ny fahalalahana ara-pivavahana mantsy ny fitondrana any, na mitazam-potsiny rehefa misy tsy manaja an’io zo io. Manaraka lamina maty paika mihitsy ny fanaovany an’izany, ary mitohitohy sady tsy mifaditrovana.
Tena manahy koa ny Filan-kevitra Momba ny Zon’olombelona ao amin’ny Firenena Mikambana satria “tsy raharahain’ireo manam-pahefana any Érythrée mihitsy ny zon’olombelona, sady amin’izay ny olom-pireneny ihany no ataony an’izany.” Manao antso avo amin’ny fitondrana any àry io Filan-kevitra io hoe ‘tokony hohajaina ny zon’ny tsirairay haneho ny heviny sy hanaraka ny feon’ny fieritreretany ary hanana ny fivavahany.’
Izao no voalazan’ny tatitra nataon’ny Vaomiera Amerikanina Miaro ny Fahalalahana Ara-pivavahana Maneran-tany, tamin’ny 2014: ‘Ny Vavolombelon’i Jehovah no tena miaritra ny mafy, satria tsy mba manana fahalalahana ara-pivavahana.’
Nilaza koa ny Mpanara-maso ny Zon’olombelona, tao amin’ny tatitra nataony tamin’ny 2013, fa mbola misambotra sy managadra ary mampijaly an’ireo mpivavaka ao amin’ny fivavahana “tsy ekena ho ara-dalàna” foana ny fitondrana any Érythrée. “Ny Vavolombelon’i Jehovah no tena lasibatra” amin’izany.
Nandray Fanapahan-kevitra Momba ny Fanajana ny Zon’olombelona any Érythrée ny Vaomiera Afrikanina Miaro ny Zon’olombelona sy ny Zon’ny Vahoaka, tamin’ny Desambra 2005. Nampirisika an’i Érythrée izy io mba “tsy hanao fitsarana miangatra intsony, ary hanaja foana ny zon’ny olona haneho hevitra sy hivory an-kalalahana.”
Nisolo tena ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany i Philip Brumley, mpanolo-tsaina momba ny lalàna, rehefa nilaza hoe: “Enga anie ka hafahan’ny fitondrana any Érythrée ireo Vavolombelona migadra any, anisan’izany ireo telo lahy efa nigadra 20 taona. Tianay koa raha tsy manenjika an’ireo mpiara-mivavaka aminay intsony ry zareo.”